Amadolobha ama-5 angahle angabi khona ku-2100 | Izindaba Zokuhamba
Siyazi ukuthi kusasele iminyaka eminingi ukuthi kufike u-2100, nokuthi ngokuqiniseka okuphelele, abaningi bethu abafunde le ndatshana, kubandakanya nami, abasekho kulomhlaba ngaleso sikhathi (ngaphandle kokuthi ithemba lokuphila komhlaba, kunjalo) kepha xwayiswa, hlala nalesi sihloko: lokhu kuphela Amadolobha ama-5 angahle angabi khona ku-2100. Usesikhathini sokubavakashela!
Idolobha laseSeattle (eU.SA) lisendaweni eyi- I-Pacific Ring of Fire. Kusho ukuthini lokhu? Lokho kusho ukuthi idolobha lisendaweni yomsebenzi omkhulu wokuzamazama komhlaba. Kwakungo-2001 lapho uSeattle ezwa ukuzamazama komhlaba kwakhe kokugcina (kungadala monakalo noma ukulimala kwabantu), kepha lokho akusho ukuthi okulandelayo akukukhulu kakhulu futhi kunemiphumela emibi kubantu bakhona. USeattle usephutheni leCascadia Subduction Zone, iphutha "elikhethekile": alibangeli ukuzamazama komhlaba okuncane, lihlala linganyakazi kuze kube ingcindezi iba ngokweqile futhi elinye lamapuleti lislayida. Umphumela walokhu kungaba ukuzamazama komhlaba okukhulu okunemiphumela efana naleyo eyahlasela i-Indonesia ngo-2004.
Ithuba lamaphesenti lokwenzeka lokhu liphakeme impela, njengoba kuqinisekiswe nguMnyango Wezesayensi Yokwakheka Kwemvelo waseYunivesithi yaseWashington: kunamathuba angama-80% okuthi uSeattle abhekane nokuzamazama komhlaba okukhulu okungu-8 eminyakeni embalwa ezayo.
Yebo, kuyadabukisa, kuyidrama impela, kepha elinye lamadolobha othando lishona kancane ngonyaka. I-Institute of Oceanography eNyuvesi yaseSan Diego eCalifornia yenze uphenyo ngemiphumela engemihle kakhulu edolobheni lase-Italy. IVenice iyacwila, ikakhulukazi ngejubane le- 4 amamilimitha ngonyakaIzindawo ezithinteke kakhulu yilezo ezitholakala eduze ngqo kwemisele. Izakhiwo zabo bezizocwila hhayi kuphela ngenxa yokukhula kwamanzi azungezile kepha futhi, ngokudidayo, ngenxa yemisebenzi eyenziwayo yokuqinisa izakhiwo, ezizosiza ukusheshisa ukuwa.
Futhi kunezinto ezimbalwa ezingenziwa lapho i-Mother Nature iyala ...
IDetroit yayiyi-mecca yomkhakha wezimoto. Lapho, ngekhulu le-XNUMX, izinkampani ezinkulu ezintathu zezimoto zakhiwa, manje ezaziwa yibo bonke: IGeneral Motors, iFord neChrysler. Lokhu, ngokusobala, kwaletha inala yezomnotho nenhlalakahle yedolobha, yingakho inani lakhona labantu lakhuphuka kakhulu (ngo-1950 ladlula izakhamizi eziyisigidi nesigamu), kepha njengamanje lincipha kakhulu. Kuze kube namuhla, iDetroit inabantu abangama-700.000, okwenza kube ngomunye wabantu abancane kakhulu e-U.S. Izizathu: Inkinga emkhakheni wezimoto, ukuthuthela kwamanye amadolobha ase-US, ukuphuma kwabantu abaningi, njll.
Ukunyamalala kweDetroit, maqondana namadolobha amabili ashiwo ngenhla, kuncike kakhulu "ekuguqulweni komuntu" kunokwemvelo, ngakho-ke kungaba khona isixazululo ngakho, kepha ngonyaka ka-2100 iDetroit akulona idolobha lesipoki, isimangaliso seqiniso.
Leli dolobha laseMali lisongelwa yi ukwenziwa ihlane. Ukwanda kwezinga lokushisa kuyo (ukushisa okukhulu) nemimoya yayo enamandla ngokuhudula kwesihlabathi, okwaziwa njenge 'harmattan', ziholela ezindaweni eziningi zedolobha zingcwatshwe ngokuphelele yisihlabathi. I-Unesco isivele ixwayise futhi yaxwayisa abantu bayo ngengcuphe yokuthi leli dolobha lizophelaigwinywe ngokuphelele yisihlabathi.
Amashwa azophinde azamazamise i-Italy, kulokhu okudalwe yi Intaba-mlilo iVesuvius lokho kuthwesa umqhele idolobha lase-Italy iNaples. IVesuvius ibizolile kusukela ngo-1944, futhi yisikhathi eside kakhulu sokulala eminyakeni engama-500 edlule. Kusho ukuthini lokhu? Ukuthi isikhathi esinde neside ngaphandle kokuqhuma, ingozi yokuthi ngokuzayo izokwenza kanjalo ngodlame oluningi inkulu kakhulu.
Ngokusho kwesazi sokuma komhlaba uMichael F. Sheridan: "Izinhlobo zamakhompiyutha zikhombisa ukuthi ukuqhuma okuzayo esikhathini esizayo kungaba kubi kakhulu endaweni engamakhilomitha ayi-12, nokuthi kungaphazamisa nokumelana nezakhiwo ezilwa nokuzamazama komhlaba". Lokhu kuzosiholela esiphethweni esicacile: INaples ibizoshiswa ngokuphelele.
Futhi uma usafisa ngokwengeziwe ukwazi ukuthi yimaphi amadolobha anganyamalala esikhathini esizayo, lawa amanye esiwasho ngezansi nawo angahle abe khona ukudangala, ngalesi sikhathi eminyakeni engaba ngu-5.000 XNUMX, ngokuthuthuka okunganqandeki kokuncibilika:
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Amadolobha ama-5 angahle angabi khona ku-2100